China အကောင်းဆုံးစမတ် Humidifier 2018 China Manufacturers & Suppliers & Factory
အကောင်းဆုံးစမတ် Humidifier 2018 - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း အကောင်းဆုံးစမတ် Humidifier 2018 ထုတ်ကုန်များ)
လျှပ်စစ်အငွေ့မရှိမဖြစ်ရေနံ Air ကို Humidifier [500ml ရေစွမ်းရည်] ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့၏အရွယ်အစား * 115mm 186mm ဖြစ်ပြီး, အများဆုံးစွမ်းရည် 500ml ဖြစ်ပါသည်, ပလတ်စတစ်ပျံ့ထက်ပိုမို 14 နာရီအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ စတာတွေဟာအလှပြင်ဆိုင်, SPA ကုမ္ပဏီ, အိပ်ခန်း, အသကျရှငျတဲ့အခန်း, ပျိုးခင်း,...
ကလေး ROOM တွင်အကောင်းဆုံး Ultrasonic မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Humidifier
ကလေး ROOM တွင်အကောင်းဆုံး Ultrasonic မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Humidifier LED အလင်းနှင့် Wood ကကောက်ပဲသီးနှံနှင့်အတူအနံ့ပျံ့။ အဆိုပါ ultrasonic ပျံ့အပူနှင့်လေအေးပေးစက်များခြောက်သွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုက်ဖျက်ဖို့လေထုစိုဓာတ်ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ အလင်းအိမ် LED နှင့်6နာရီအထိအလုပ်လုပ်တယ်7နဲ့လာပါတယ်။ အင်္ဂါရပ်များ *...
ကြွေ Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ Humidifier လေအေးပေးစက်နှင့်ဝေးဝေးနေပါ၊ နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အသားအရေတင်းကျပ်ခြင်းသို့နှုတ်ဆက်ပါ၊ တစ်နေ့လျှင်နာရီအနည်းငယ်ရေစိုပေးပါ။ ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများအနည်းငယ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ လေကိုလန်းဆန်းစေသည်၊ သန့်စင်စေနိုင်သည်။...
အလှဆင် Aroma Humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့
အလှဆင် Aroma Humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့ Aromatherapy Diffuser စုဆောင်းမှုအသစ်သည်လေ ၀ င်လေထွက်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အမြင်၊ ရနံ့နှင့်ထိတွေ့မှုတို့မှတဆင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးပွားစေသည်။ အဆိုပါ Aromatherapy...
ရနံ့ကုထုံး Humidifier အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့လေ
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၂၂၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံးများ - ၅၂၅ * ၃၅၅ * ၄၇၀ မီလီမီတာ / ၁၂pcs
ရနံ့ကုထုံး Humidifier အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့လေ Ultrasonic Humidifier ဖြင့်အေးဆေးသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပါ ultrasonic ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အနံ့ humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သင်၏အခန်းကို humidifying မှအကျိုးကျေးဇူးများကိုအောင်မြင်ရန်ဖို့စတိုင်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ (သို့)...
လင်းပိုင် Shape Walmart မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့မှု humidifier
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၂၅ * ၁၂၅ * ၂၁၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံးများ - ၅၁၅ * ၃၉၀ * ၄၅၀ မီလီမီတာ / ၂၄ ပြားပါ ၀ င်သည်
လင်းပိုင် Shape Walmart မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့မှု humidifier Soothing and Relaxing: Cool mist diffuser သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ရုံသာမကအလိုအလျောက်ပိတ်ထားသော အင်္ဂါရပ်နှင့် ပြည့်စုံသောစိတ်ခံစားမှုကိုပေးနိုင်ရန်ပေါင်းစပ်ထားသော LED မီးလုံးများနှင့်အရောင်များကိုပြောင်းလဲပေးသည် ။...
လှပသော Glass Humidifier ပျံ့နှံ့ Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ
လှပသော Glass Humidifier ပျံ့နှံ့ Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ 1. အနံ့ပျံ့။ Glass ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း၊ ဖန်ပျံ့နှံ့သူသည်အတွင်းပိုင်းကိုစိုစွတ်အောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ငြိမ်သက်သော ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးသည်။ 2. စွမ်းရည် - 200ml ။ ပစ္စည်း - Glass + PP၊ အလုပ်လုပ်ချိန် - ၈ နာရီအထိ။...
ဝါးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Cool Mist Humidifier Ultrasonic
ဝါးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Cool Mist Humidifier Ultrasonic Real Bamboo Finish နှင့် Sleek Design: ဤ ၀ ါးပျံ့ပျံ့သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးသဘာဝအရကြည့်လျှင်အရည်အသွေးမြင့်ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Air Outlet: မြူမှုန်များကိုပိုမိုချောချောမွေ့မွေ့ထွက်ပေါ်လာစေရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောလေထွက်ပေါက်နှင့် ultrasonic...
အသေးစားလေအေးပေးစက်အနံ့ Humidifier အနံ့ပျံ့
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၂၇ * ၁၂၇ * ၁၉၅ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 540 * 405 * 410mm / 24PCS
အသေးစားလေအေးပေးစက်အနံ့ Humidifier အနံ့ပျံ့ အိမ်မှာအနံ့ရှိသလား။ ခလုတ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်သင်သည်မွှေးကြိုင်သောလေကိုခံစားနိုင်သည်။ မိသားစုများစွာအတွက်အလုပ်အကြောင်းကြောင့်လူအများစုသည်နံနက်ခင်းတွင်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်တစ်နေကုန်ထွက်သွားကြလိမ့်မည်။ အိမ်တွင်းရှိပြတင်းပေါက်များသည်အခြေခံအားဖြင့်ပိတ်ထားရသည်။...
Ultrasonic Humidifier အမေဇုံသြစတြေးလျအနံ့ရေနံပျံ့
Ultrasonic Humidifier အမေဇုံသြစတြေးလျအနံ့ရေနံပျံ့ သင်အလုပ်လုပ်သည့်အခါ၎င်းကိုစားပွဲပေါ်တင်ပါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုသည်မိုးရွာပြီးနောက်ကဲ့သို့လန်းလန်းသည်။ တစ်နေ့တာစွမ်းအင်ပြည့်ဝစွာဖြင့်၊ သင်၏စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်သင့်လျှို့ဝှက်မှော်လက်နက်သည်! လျင်မြန်စွာလမ်းလျှောက်နေသောမြို့၏ဘဝသည်လူတို့အားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။...
ကြီးမားသောHရိယာ Humidifier အမေဇုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၂၅၀ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - 525 * 355 * 520mm / 12pcs
Areaရိယာ Humidifier အမေဇုံယခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ ရုံးစိုထိုင်းဆ။ အလုပ်လုပ်နေသောသူများအတွက်ရုံးခန်းလေအေးပေးစက်သည်အမြဲတမ်းရှိပြီး၊ ခြောက်သွေ့သောအသားအရေကိုစိုပြေစေပြီးအစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းရန်အတွက် desktop ပေါ်တွင် humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အိမ်တွင်အစိုဓာတ်...
အကောင်းဆုံးစမတ် Humidifier 2018
အကောင်းဆုံး Mini ကို Humidifier 2018
အကောင်းဆုံး Air ကို Humidifier